Vaovao - Tombony sy fatiantoka ny chandelier sy ny jiro valindrihana
Amin'ny dingan'ny haingon-trano, ny safidin'ny jiro dia rohy tena lehibe. Amin'ny tsenan'ny haingon-trano ankehitriny, ny jiro mahazatra dia azo zaraina amin'ny karazany roa: jiro sy jiro valindrihana. Ireo karazana jiro roa ireo dia samy manana ny mampiavaka azy, izay mahatonga ny olona maro hahatsapa ho voafandrika rehefa misafidy. Tsara kokoa ve ny chandelier sa jiro valindrihana? Andao hiara-mijery.
Tombony amin'ny chandelier
1. Haingo trano vaovao, samy te handravaka tsara sy tsara tarehy ny tsirairay. Ny jiro valindrihana dia samy manana ny tombony ananany, fa ny chandelier dia tsara kokoa amin'ny endrika ivelany.
2. Misy karazana chandelier maro. Ampiasaina matetika ny chandelier vita amin'ny labozia eropeana, ny chandelier sinoa ary ny chandelier kristaly. Izy io dia azo ampifanarahana amin'ny fomba firavaka isan-karazany ao an-trano.
3. Ny chandelier dia manaparitaka ny takamoa mba hanamorana ny fanaparitahana ny hafanana. Ary avelao ny elanelana lavitra amin'ny tabila fametrahana, na dia apetraka amin'ny fitaovana mora mirehitra aza izy io dia afaka misoroka afo tsy misy fangarony.
Tombony amin'ny jiro valindrihana
1. Ny jiro valindrihana dia azo apetraka mivantana eo amin'ny valindrihana, mora apetraka ary malala-tanana amin'ny fomba, izay afaka manome fahatsapana mazava sy mamirapiratra eny amin'ny habakabaka.
2. Ny jiro valin-drihana dia tsy mitaky fepetra lehibe amin'ny haavon'ny efitrano, izay afaka misoroka ny fahatsapana ny fahaketrahana amin'ny habakabaka. Na ny fizarana maivana aza, ny fikojakojana sy ny fanadiovana tsotra ary ny fahombiazan'ny vidiny avo lenta.
3. Ny jiro valin-drihana dia mora diovina, ary ankehitriny ny jiro valindrihana LED sasany dia misy fiovan'ny loko, azonao atao ny manova ny jiro mangatsiaka sy mafana amin'ny finiavana hitarika ny rivotra iainana ao anaty.
Inona avy ireo hevitra tokony hodinihina rehefa mifidy jiro?
(1) Ho an'ny trano kely, ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia voafetra ihany amin'ny faritra. Rehefa misafidy jiro sy jiro, eo ambanin'ny antony mahafa-po ny jiro, dia afaka misafidy jiro valindrihana antonony ianao, raha tsy izany dia hiseho ho be olona be ny toerana anatiny.
(2) Jiro kristaly na jiro valizy lehibe dia azo fidina ho an'ny trano lehibe na villa. Tsy afaka handravaka tsara ny trano fotsiny izy io, fa ny loharano maivana koa tena ahazoana aina.
(1) Ny chandelier matetika dia mila milentika mihoatra ny 40 cm mba hisy vokany tsara kokoa. Mandritra izany fotoana izany, ny haavon'ny fametrahana ny chandelier dia tokony tsy latsaky ny 2.2 metatra miala amin'ny tany.
(2) Ny jiro valindrihana dia tokony hofidina ho an'ny efitrano misy haavon'ny ambany noho ny 2.8 metatra; ho an'ny efitrano fandriana miaraka amin'ny haavon'ny trano 2,8-5 metatra na mihoatra, ny chandelier matevina dia azo fidina.
Matetika ny fomba haingo mirentirenty sy sarotra dia mety amin'ny chandelier misy endrika sarotra sy loko mamirapiratra; raha ny fomba fanaingoana tsotra kosa dia mety kokoa amin'ny jiro valindrihana misy endrika tsotra sy loko madio.
Ny jiro dia tsy ampiasaina ho fitaovana jiro mba hanomezana antsika loharano maivana sy jiro fanampiny, fa koa fitaovana haingon-trano izay tsy azo odian-tsy hita ao an-trano. Noho izany, ny safidin'ny jiro dia tsy maintsy atambatra amin'ny singa samihafa mba ho safidy siantifika be indrindra eo am-piandohana.
Fotoana fandefasana: Apr-22-2021